67ha noho ny fanendahana finday nataony ny alakamisy 23 janoary 2020 teny 67ha cité. Tamin’io, tokony ho tamin’ny 03 ora sasany tolakandro no narahin’ity lehilahy ity avy ao aoriana ny vehivavy iray 47 taona. Nony varimbariana ity farany dia nosintoniny ny finday teny an-tanany ary lasa nandositra izy.
Niezaka nanenjika ity mpanao sinto-mahery moa ny mponina izay nahita ny zava-nitranga saingy tsy tratra ilay olon-dratsy. Tamin’ireo mpanenjika anefa dia nisy nahafantatra ilay olon-dratsy sy ny toerana fonenany eny Ambodirano Ampefiloha. Ny zoma 24 janoary tokony ho tamin’ny 09 ora maraina dia tonga teny amin’ny trano fonenany ny vaomieran’ny fandriampahalemana sy ny tompon’ilay finday ary rehefa nisy ny fifampiresahana dia niaiky ilay lehilahy fa hamerina ilay finday saingy nanome fotoana kosa izy hanaterany ilay finday satria efa tsy teny aminy intsony fa efa nokasainy hamidy. Tonga nanatitra ilay finday teny amin’ny ABC School 67 ha tokoa ary ity lehilahy ity tokony ho tamin’ny 01 ora sasany tolakandro.
Manoloana ny hatezeran’ny olona tamin’ity olon-dratsy ity sy ny saika nisian’ny fitsaram-bahoaka anefa dia niantso polisy ny vaomieran’ny fandriampahalemana ary tonga faingana ny polisy naka ilay lehilahy io. Nandritra ny fanadihadiana azy dia niaiky izy fa nanao ilay fanendahana, ary nilaza fa noho ny fitambesatry ny trosa tokony haloany tamin’io andro io no antony nanaovany izany. Nilaza ny tsy hitory azy moa ilay vehivavy voaendany io. Efa tafaverina taminy ihany koa ilay findainy.